သတင်း - NYC English – Speak · English · Fast
Financial Advisor Appointed
Guido Theuns joined the NYC English LLC team asacorporate strategy and investment advisor.
The telecoms company, MyTel, agreed with NYC English’s Myanmar distributor, Tin Htay international PTY Ltd., to offer the app based English language learning service, ‘MyEnglish. Powered by NYC English’, to their over 8 million active users.
NYC English သည် ၂၀၁၇ တွင် ComputED Gazette မှအကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲ ဆု ရရှိခဲ့
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ် ပြောဆိုသင်ယူခြင်းသည် ခက်ခဲ၏ ""အင်္ဂလိပ်စာသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖျက် သည်။အင်္ဂလိပ် စာသည် တူညီသောအသံထွက်ရန် စကားလုံးများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပုံမရဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ough နှင့်ဆုံးသော enough, slough, dough, bough,cough စသည်တို့ကို မစဉ်းစားပဲ ပင်ရင်း ဒေသ (ဂျာမေကာ၊ သြစတေးလျား၊ ယော့ရှိုင်းယား၊ ဘရွတ်ကလင်း) ပေါ်မူတည်၍ သိသိသာသာပြောင်းလဲသည် ။ ""
မိခင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမဟုတ်သောကျောင်းသားများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှု နည်းလမ်းကို ပုံစံပြုကြိုး ပမ်း မှု သည် ပညာရေး သမားများ နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအကြား ဆွေးနွေးမှုနှင့် သုတေသန များစွာ၏ တူညီသော ဆွေးနွေးစရာခေါင်းစဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ""များစွာသော ကွန်ပြူတာအခြေပြုနှင့် အင်တာနက်အခြေပြုအားထုတ်မှုများသည် အထင်ကြီးလောက်စရာဖြစ်ခဲ့သော် လည်း NYC English ထက်ပို၍ တစ်ခုမျှပိုမိုသာလွှန်ခြင်းမရှိသည်မှာ ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါသည်။ "" NYC English""နယ်ပယ်အသစ် ( နှင့် ၂၀၁၇ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွက် ESL / ELL အထက်တန်းကျောင်းတွင်အောင်မြင်ခဲ့သော BESSIES )၊ NYC English က ELL /ESL တို့အားသင်ကြားရန် တိကျသော၂၁ ရာစု ချဉ်းကပ်မှုကိုယူဆောင်ပေးပါသည်။ ""
NYC English တွင် အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်ပါသည်။ အခြေခံစတင်သင်ယူသူ၊ အလယ်အလတ်သင်ယူသူနှင့် အဆင့်မြင့်သင်ယူသူတို့ဖြစ်ကြပြီး အဆင့်တိုင်းတွင် မျက်မှောက်ခေတ် ဘဝ အကြောင်းအရာ ၃၀ ကိုပေးထားပါသည်။ "" ထိုအကြောင်းအရာ တို့ ကို ယူနစ်ခွဲများအဖြစ်ခွဲ၍ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအလိုက် မိတ်ဆက်ပေးသူလူငယ်ဆရာဖြင့် အစပြုထားပြီး စိတ်ပါလက်ပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းထားပါသည် ""အဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ ကြိုတင် ရောက်သည့် ကျောင်းသား အဖြစ် ချက်ခြင်းရေးသားမှုကိုဖြည့်စွက်ပေးထားပါသည်။ အားလုံးသောကျောင်းသားလုပ်ဆောင်ချက် များကို မှတ်တမ်းထားရှိပြီး ကျောင်းသားနှင့်ဆရာ နှစ်ဦးစလုံးတို့၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေပြသထားပါသည်။ "
အခြားသောအလားတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ယူမှုအစီအစဉ်များ နှင့်ကွာခြားမှု မှာ အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်သံကြည် အပြတ်အတောက်မရှိ ဗီဒီယို၊ ကျစ်လစ် ပီပြင်အသေးစိတ်ကျသော ၊ အရည်အသွေးမြင့် အသံနှင့် အသုံးပြုသူနှင့် လွယ်ကူခြင်း သည် သိသာထင်ရှား စွာ စတင် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ NYC English သည် လေ့ကျင့်ရန် ပစ်မှတ် စကားလုံး နှင့် စကားစုများ၊အဓိကဝေါဟာရ ၊ ( လောလောဆယ် ဘာသာ၁၀ မျိုး ပေးထားပြီး ထပ်မံ၍ ၆ မျိုး မကြာမီပေးပါမည်) သင်ယူသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ချက်ခြင်းဘာသာ ပြန်ပေး ထားနိုင်သောတစ်ကြောင်းချင်းဖတ်ကြားခြင်း၊ အသံသွင်းထားပြီး နောက်ပြန်လည်ဖွင့်၍ အသံထွက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း တို့ဖြင့်ကျောင်းသားများအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ NYC English ကို ကိရိယာမရွေး၊အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
NYC English ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ယူမှု အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပုံစံထုတ်သူဖြည့် စွက်ချက် နှင့်အစီအစဉ်ကိုမွမ်းမံခြင်းဖြင့် အမှန် အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်NYC English ဝန်ထမ်း များကပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်မှန်းပါသည်။
NYC English ကို စတင်မိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် အချိန် ဇယား
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဝ်ဝဲ (Software) ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘီတာ (အစမ်း) ထုတ်ကုန်စတင်ထုတ်ခြင်း
ပထမ ဆော့ဖ်ဝဲ (App) စတင်ထုတ််ဝေခြင်း